Ra’yiga shaqsiga |
Suhagra buy online, clomid online.
Sheiknor Abucar Qassim
Dowladnimadda waxay leedahay habmaamus ( Protocol ). Wasaaradda Arimaha Dibadda iyo Madaxwtooyadaba waa inay leeyihiin The Office of the Chief of Protocol, tasoo xilkoodu yahay inay dhoowraan sharafka Madaxwaynaha umadda Soomaaliyeed. Waxay shaqadooda tahay inay diyaariyaan safarda madaxwaynaha iyo wafdigiisa iyo kuwa dalka imaanaayo (diplomatic protocol).
Waxaan maanta aragnay in Madaxwaynaha Kenya Hon. Uhuru Kenyatta asagoo safar shaqo ku tagay dalka Talyaniga, uuna soo dhaweeyay Prime Minister Matteo Renzi, uuna la qaatay salaan sharaf ciidanka dalka Italy sida caadada u ahayd habmaamuuska madaxwayne-nimo.
Nasiib daro isla shalay inaan aragno Madaxwaynaha Soomaaliya oo tareen ka soo dagaayo asagoo boorsooyinka laga daba wado. Tani waxay sharaf dhaca u tahay calanka Soomaaliyeed. Waxaan ku talinayaa in xilalaka laga qaado kuwa ka masuulka ah arinkaan, shaqadana loo dhiibo dad aqoon u leh habmaamuuska iyo nidaamka nidaamka dowladnimada.
Sababta aan uga hadleeyno arimahaan oo kale waa mid aan dooneeyno inaan waxku saxno, ma aha mid loogu dan leeyahay shaqsi.